परिवारलाइ खुसि दिन प्रदेश गएका आफन्त आए बाकसमा, शव राखेको बाकस देखेपछि भक्कानिए आमा र श्रीमती र छोराछोरी (फोटोफिचर) « Etajakhabar
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को जहाजले मलेशियाबाट २४ वटा नेपालीको शव नेपाल ल्याएको छ । निगमको वाइडबडी ए३३० जहाजले मलेशियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकैपटक २४ वटा शव र तीन वटा अस्तु नेपाल ल्याएको हो । सबैभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको मलेसिया नेपाली श्रमिकको धेरै मृत्यु हुने मुलुकमा पर्छ ।
शनिवार त्रिभुवन अन्तराष्र्टिय विमानस्थलको दृष्य अलि फरक थियो । विमानस्थल परिसरमा बैदेशिक रोजगार एवं अन्य कामको सिलसिलामा विदेश गएकाहरु प्राय खुसी लिएर आउथे ।
तर, शनिवारको दृष्य विल्कुल फरक थियो । कामको शिलसिलाम मलेशिया गएका मध्ये विभिन्न कारणले मृत्यु भएका २४ जना नेपालीहरुको शब ल्याईको थियो । परिवारमा खुसी ल्याउछु भन्ने वाचा गर्दै गएकाहरु बन्द बकासमा मृत फर्किएका थिए भने तिनको आफन्तहरु शोकाकुल थिए ।
शबको प्रतिक्षामा रहेका आफन्तहरु प्लाष्टिकले छोपिएका शवको बाकस देख्ने बित्तिकै बाकसमै अंगालो हालेर भक्कानो छाडिरहेका थिए । कसैका आमा त कसैका श्रीमती त्यही बाक्कसलाई ग्वाम्लाङ अंगालो हालेर रुँदै थिए ।
विदेशमा श्रम र पसिना बेच्न गएका नेपाली दाजुभाइ दिदिबहिनीको शव ल्याउदा जस्तो दुख पीडा अरु कुनै पनि उडान गर्दा हुन्न।तथ्यांकमा मात्र सिमित हुने त होला देशको सरकारको निमित्त तर मृत व्यक्ति तथा उनका आश्रित परिवारको भने सर्वस्व गुमेको छ! अब पनि पुगेन देशलाइ बरबाद पार्दै नेपाली जनतालाइ बिदेश जान बाध्य बनाउने गरि एक आपसमा झगडा गर्न??? यति देखे पछि त केही गर्नु नि देश र जनताको लागि!!! आफ्नो अनि पार्टीको स्वार्थ भन्दा माथी उठ्न सकिन्न र?? तस्विर, राजधानी दैनिक र विजय लामाको वाल बाट/हेरौं केही टिठ लाग्दा तस्विर ।
नोट : etajakhabar मा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए, कुनै विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव र समाचार प्रकासित गर्नु परेमा वा बिज्ञापन दिनु परेमा हामीलाई etajak[email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।